Airbus neAir Lease Corporation Yoparura Chirongwa Chitsva cheMulti-Miriyoni-Dollar Fund
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Airbus neAir Lease Corporation Yoparura Chirongwa Chitsva cheMulti-Miriyoni-Dollar Fund
Airbus neAir Lease Corporation (ALC) iri kuparura chirongwa chehomwe yemamiriyoni emadhora ESG icho chichabatsira mukudyara muzvirongwa zvekusimudzira zvendege izvo mune ramangwana zvichavhurwa kune vakawanda vane chekuita nendege yekurojesa nekupa mari munharaunda nezvimwe.
Air Lease Corporation yakasaina Tsamba Yechinangwa inovhara Mhuri dzese dzeAirbus, ichiratidza simba rekambani yakazara chigadzirwa. Chibvumirano ndeche 25 A220-300s, 55 A321neos, 20 A321XLRs, ina A330neos uye inosanganisira manomwe A350F. Kurongeka kunopedzwa mumwedzi iri kuuya, kunoita kuti Los Angeles yakavakirwa ALC ive imwe yevatengi veAirbus hombe uye mudiki ane hombe A220 bhuku reodha. Yakavambwa muna 2010, ALC yakaraira huwandu hwe496 Airbus ndege kusvika parizvino.
"Ichi chiziviso chehurongwa hutsva mhedziso yemwedzi yakawanda yekushanda nesimba uye kuzvipira nemasangano ese ari maviri kukwidziridza nekugadzirisa hukuru uye chiyero chekutengeserana kwendege uku tichitarisa kukura kuri kukurumidza kudiwa kwendege dzepasirese kuti vagadzirise ndege dzavo dzejeti kuburikidza neALC. yekurenda," akadaro Steven F Udvar-Hazy, Sachigaro Mukuru weAir Lease Corporation. "Mushure mekubvunzurudzwa kwenguva refu uye kwakadzama nevatengi vedu vendege dzepasirese pasirese, tiri kutarisa kurongeka uku pamhando dzendege dzinodiwa uye dzinodiwa, dzinofukidza mhuri dzeA220, A321neo, A330neo neA350. ALC Mutungamiriri weMusika wepasi rose mune imwe neimwe yeaya mapoka eazvino Airbus chigadzirwa mutsara. Aya ekuwedzera kwemakore akawanda emidziyo mitsva yetekinoroji kune ALC iri kuwedzera portfolio inozotitendera kuti tikure mihoro yedu uye pundutso tichigutsa zvinodiwa nevatengi vendege.
Udvar-Hazy akawedzera kuti: "ALC ndiyo yaive yekutanga mutengi kune yakakurumbira A321LR uye XLR shanduro. Ikozvino, isu tinova mudiki wekuvhura weA350F uye nekure mukuru mudiki mutengi weA220. Isu takava nechiratidzo chekuve vekutanga kutora iyo A321 uye tine chokwadi chekuti taita sarudzo chaiyo zvakare paA220 neA350F, tichipindura zvatinoona musika uchada munguva yekupora iri pamberi. Pamusoro pezvo isu tine chishuwo chekuisa mubatanidzwa kune homwe yekusimudzira izvo zvinozobatsira mune ramangwana rakasvibira reindasitiri yedu. "
"Nehurongwa hukuru uhu, tinosimbisa chivimbo chedu kwete mune ramangwana rakasimba uye kukura kwekufambisa kwemhepo kwepasirese, asi mune bhizinesi reALC, musarudzo dzedu dzekutenga ndege dzinosanganisira, kekutanga, itsva A350 Freighter, uye pakupedzisira. mukuona kwedu kwenguva refu kuti kuhodha ndege itsva imari yakakwana yekudyara kwevanogovana mari yedu, "akadaro John Plueger, Air Lease Corporation CEO uye Mutungamiriri. "Uyezve, isu neAirbus pano tinozivisa danho rekutanga rakabatana ESG mukutenga ndege nekugadzira homwe yemamiriyoni emadhora yemapurojekiti ekusimudzira ndege akakosha kune ramangwana".
“Ichi chiziviso chikuru cheAirbus muna 2021. Odha yeALC inoratidza kuti tiri kufamba kupfuura Covid doldrums. Nekuona zviri mberi, ALC iri kusimbisa kurongeka kwayo kwemhando dzendege dzinodiwa zvakanyanya sezvatinobuda mudambudziko uye kunyanya, yaona kukosha kunotyisa kunounza kumusika wekutakura zvinhu neA350F. Kutsigira kweALC kunosimbisa kushingairira kwepasirese kwatinoona kweiyi quantum kusvetuka munzvimbo yekutakura uye tinorumbidza hungwaru hwayo mukuisarudza uye mukurova munhu wese kusvika pamutsetse wekutanga kuziviswa kweA350F. Pamusoro pezvo takabvumirana kuita chiono chedu chekufamba nendege chikamu chechibvumirano ichi chinova chinhu chakakosha kwatiri tese, "akadaro Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer uye Musoro weAirbus International.
Iyo A220 ndiyo yega chinangwa chendege yakavakirwa musika wezvigaro zve100-150 ichiunza isingakundiki 25% yemafuta ekufambisa zviri nani* uye ine vanhu vakawanda vatyairi kunyaradza mundege ine nzira imwe chete. Iyo A321 Mhuri iyo inosanganisira XLR vhezheni inosvika 4,700nm kureba uye 30% yakaderera kushandiswa kwemafuta * yakasanganiswa neA330neo vanodyidzana vakanaka kune vanonzi pakati pemusika chikamu. Iyo A350F, yakavakirwa pamutungamiri wenyika yemazuva ano akareba akagadziridzwa mashandiro ekutakura zvinhu achipa inokwana 20% yakaderera mafuta ekupisa pane makwikwi uye chete chizvarwa chitsva chekutakura ndege chakagadzirira 2027 ICAO CO2 emissions zviyero.
* pamusoro pekare chizvarwa chinokwikwidza ndege